Ardayda dhigata dugsiga sare waxay ardayda yar yar u bartaan cashar dhaqanka iyo aqbalida ah | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Deegaanka Hargabku ISD 834
Markii uu koray, Shahd Abouhekel, oo ah oday sare oo ka tirsan Dugsiga Sare ee Stillwater Area, marar dhif ah ayuu is arkay iyada iyo dhaqankeeda oo matalaya dugsigeeda. Ma arkin jilayaal buugaag ku labisan xijaab ama maqal taariikhda muslimiinta mid ka mid ah fasalladeeda. Marka markay fursad u heshay inay ka hadasho xijaabka ardayda dugsiga hoose ee degmada oo dhan, ayay ku boodday fursadda.
"Ma aanan helin khibrad sidan oo kale ah intii aan ku jiray dugsiga hoose," ayuu yiri Abouhekel. “Waxaan naftayda u sheegay inay noqon laheyd fursad layaableh haddii koox arday ah ay la wadaagaan wixii ay kala kulmeen xijaabka markii aan yaraa. Ama xitaa haddii aan haysanno buugaag matalaya dhaqamo kala duwan. Haddii aan waayo-aragnimadan heli lahaa, waxay fureysaa wadahadal oo [asxaabteyda fasalku] waxay baran lahaayeen xijaabka iyo macnihiisa dhabta ah da 'yar.
Abouhekel iyo ardayga kale ee dhigta dugsiga sare Thuha Al-Dokhl ayaa lagu casuumay khabiiro ku takhasusay warbaahinta aasaasiga ah si ay ula hadlaan ardayda oo qayb ka ah casharka iyaga oo adeegsanaya buugga Under My Hijab ee Hena Khan. Labada lamaane ayaa sameeyay fiidiyow la tusay dhammaan ardayda dugsiga hoose ee degmada si ay ugu sharxaan waxa xijaabku yahay iyo sababta qof u xiran karo. Fiidiyowga, waxay ku tusayeen ardayda yar-yar siyaabaha kala duwan ee loo xiro Xijaabka, waxayna kala hadleen wixii ay la kulmeen - mid wanaagsan iyo mid xunba.
Khabiirada warbaahinta ayaa muujiyey fiidiyowga intii ay ku jireen casharradooda, sidoo kale waxay qabteen laba kulan oo loo yaqaan 'Zoom' halkaasoo ardayda yar yar ay kula kulmi karaan Abouhekel iyo Al-Dokhl oo ay ku weydiin karaan su'aalahooda u gaarka ah xijaabka iyo dhaqanka muslimiinta. Ardaydu waxay weydiiyeen waxyaabo ay ka mid yihiin, "Ma la seexdaa?" Immisa xijaab ayaad haysataa? iyo "Waa maxay midabka aad ugu jeceshahay?" Labada arday ee dugsiga sare waxay diiwaangeliyeen dhammaan su aalihii ay ka heleen ardayda dugsiga hoose waxayna buuxiyeen in kabadan 28 bog.
"Carruurtu waa dad maskax furan oo xiise leh haddii aanaan siinin booskaas si ay wax uga bartaan maaddo, markaa waligoodna ma sameyn karaan oo wax ma weydiin doonaan," ayuu yiri Abouhekel “Hal qaadasho oo aan rabo inay ardaydu fahmaan ayaa ah in kastoo aan dhammaanteen ka duwanahay, haddana waa inaan isku duubnaa cidda aan nahay oo aan is aqbalnaa. Waa inaan kuwa kale ula dhaqannaa si xushmad leh oo aan is xaqirayn. Dabaaldegyada kala duwanaanshaheenna ayaa ah waxa na xiriiriyey! ”